Otu esi edebanye aha ụghalaahịa | Ozi ECommerce
Etu ị ga-esi debanye aha
Encarni Arcoya | | StartUps na ndi oru itumgbere ahia
Mgbe ịchọrọ ịmalite wee jiri echiche ọhụrụ ma ọ bụ ọrụ ọhụụ nye ya, ihe mbụ akwadoro bụ ịdebanye aha ya, ọkachasị ka onye ọ bụla ghara izuru gị ya. Ma, Otu esi edebanye aha ụghalaahịa? Enwere ike ime ya mgbe niile? Kedu usoro ị ga -eso?
Ma ị ga -emepe eCommerce, jikwaa ọrụ, mepụta aha azụmahịa, akara, ngwaahịa, ozi a anyị na -agwa gị dị gị ezigbo mkpa. Gaa maka ya!
1 Kedu ihe bụ ika?
1.1 Ụdị ụghalaahịa
1.2 Gịnị bụ ika?
2 Nzọụkwụ tupu ịdenye ụghalaahịa
3 Otu esi edebanye akara site na nzọụkwụ
3.1 Debanye aha ụghalaahịa n'onwe gị
3.2 Debanye aha n'ịntanetị
4 Ogologo oge ole ka ọ na -ewe iji debanye aha ụghalaahịa?
Kedu ihe bụ ika?
Akara, nke a makwaara dị ka aha azụmaahịa, bụ aha nke a ga -eji mara gị na nke ị ga -eji nwee ikike iji ya na ihe dị iche ikwu na ndị asọmpi gị. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ bụ aha na -enye gị ohere ịmata onwe gị na nke ahụ bụ nke gị ka onye ọ bụla wee mara gị yana ka ị nwee ike ree ngwaahịa na / ma ọ bụ ọrụ.
Akara ụghalaahịa bụ utu aha nke steeti nyere wee nye ohere ka ndị nwere ya, ndị ga -abụrịrị ndị mmadụ n'otu n'otu ma ọ bụ ụlọ ọrụ, dị iche na asọmpi ha.
Ụdị niile A ga -edebanye aha ha n'akwụkwọ na Patent na Trademark nke Spanish, nke a maara dị ka OEPM. Nke a bụ ụlọ ọrụ ọha nke ọ bụghị naanị na ha na -ahụ maka ndebanye aha, kamakwa na -enyocha na ụdị abụọ adịghị otu.
Mgbe ị ga -edebanye aha ụghalaahịa, ị kwesịrị ịmara na e nwere ụdị dị iche iche. Dị ka ọmụmaatụ:
Akara okwu. Ha bụ ndị ejiri aha ma ọ bụ ụka mara.
Ngwakọta agwakọta. Ndị ọ bụghị naanị nwere aha ma ọ bụ ụka, kamakwa ha nwere akara.
Akara eserese. Ndị nwere naanị akara ma ọ bụ eserese.
Gịnị bụ ika?
Akụkụ ọzọ ị ga -eburu n'uche bụ na, maka ihe a ga -ewere dị ka akara, ọ ga -emerịrị ụfọdụ ihe achọrọ. Otu n'ime ha bụ otu nwere ike ịbụ aha mmadụ, ịbịaru, leta, agba, ọnụọgụ, ụdị ngwaahịa, ụda, nkwakọ ngwaahịa na:
Chọpụta ngwaahịa na / ma ọ bụ ọrụ na asọmpi ahụ.
Edebere ya na ndekọ aha ụghalaahịa.
Nzọụkwụ tupu ịdenye ụghalaahịa
Tupu ịkọwa ihe bụ usoro ị ga -emerịrị iji debanye aha ụghalaahịa, ọ dị mkpa ka ị nyochaa ma aha ahụ i chere dị. Nke ahụ bụ, enweghị ụlọ ọrụ ọzọ ma ọ bụ onye ọchụnta ego nke edebara aha otu aha. Ọ bụrụ otu a, ị gaghị enwe ike ịdebanye aha ya n'onwe gị.
Iji mee nke a, ị ga -aga na webụsaịtị nke ọfịs Patent na Trademark nke Spain na lelee akara ụghalaahịa na aha azụmaahịa na ọdụ data. Na ngalaba ahụ, ị ​​ga -agarịrị '' locator brand '', yana, n'ime igwe nchọta na -apụta, ị ga -etinyerịrị '' Okpukpe: Nwere '', '' Modality: All ''. Enwere ihe ncheta na -esote ya, ebe ahụ ka ị kwesịrị itinye aha akara gị.
Ọ bụrụ na enweghị ndekọ, ozi ga -apụta:
"Enweghị nsonaazụ ahụrụ maka nchọta nchọta akọwapụtara."
Kedu ihe nke ahụ pụtara? Ọ dị mma, akara ụghalaahịa ịchọrọ ịdebanye aha bụ n'efu yana ị gaghị echegbu onwe gị maka ịmalite usoro maka na nsogbu agaghị adị (ọ gwụla ma mmadụ abụọ debara aha otu ihe n'otu oge).
Nke a dị ezigbo mkpa n'ihi na ọ bụrụ na i jiri aha akara edebanyela aha wee malite usoro a, ha ga -agọnarị ya, mana ị ga -efufukwa ego na usoro a, ebe ọ bụ na ị nwetaghị ya. Ị ga -amalite usoro ahụ ọzọ ka ị nwee ike malite ọzọ wee kwụọ ụgwọ ọzọ.
Otu esi edebanye akara site na nzọụkwụ
Na -esote anyị ga -akọwa nzọụkwụ site nzọụkwụ ihe ị ga -eme iji debanye aha ụghalaahịa. N'ezie, enwere ụzọ abụọ iji mee ya: na ọnụnọ, yana n'ịntanetị. Anyị na -akwado nhọrọ nke abụọ n'ihi na, na mgbakwunye na ịdị ngwa ngwa enwere ike ịme ya n'oge ọ bụla n'ehihie ma ọ bụ n'abalị, ọ dịkwa ọnụ ala karịa n'ihi na ha na -enye ego maka ịkwụ ụgwọ n'ịntanetị.
Debanye aha ụghalaahịa n'onwe gị
Mgbe ị na -edebanye aha ụghalaahịa n'onwe gị, ihe mbụ ị ga -eme bụ ịga na ụlọ ọrụ patent na ụghalaahịa Spanish. Ị ga -edejupụta fọm ndebanye aha ụghalaahịa, nke ga -agụnye ozi niile ha rịọrọ (nkọwa nkeonwe, aha ụghalaahịa, ụdị ...).
Na mgbakwunye, ị ga -ebu ya ihe akaebe nke ịkwụ ụgwọ ego ngwa Ebe ọ bụ na, ọ bụrụ na ịnweghị ya, ha agaghị anabata ya, ị ga -agakwa kwụọ ya tupu ịdebanye akwụkwọ.
Ozugbo ị napụtara ha, ha ga -elele na ihe niile ziri ezi ma, ọ bụrụ na ha ahụ ọdịda, ha ga -arịọ gị ka ị gbanwee nkwupụta ahụ n'otu oge ka ị nwee ike ịga n'ihu na ụzọ ya (ma ọ bụghị ya, a ga -ama ya ikpe ma tinye ya akwụkwọ, nwere ịmalite ọzọ).
Debanye aha n'ịntanetị
Dịka anyị gwara gị na mbụ, ndebanye aha ụghalaahịa na -adị ngwa ngwa, dịkwa mfe ma dịkwa ọnụ ala, nke bụụrụ ọtụtụ mmadụ ahụ efe.
Iji mee nke a, ị ga -aga na webụsaịtị Spanish Patent na Trademark Office (OEPM) na banye na ụlọ ọrụ elektrọnik. N'ebe ahụ ị nwere ike ịdebanye aha ihe niile ịchọrọ, site na ụdị gaa na ihe mepụtara, ihe nrụpụta ụlọ ọrụ, wdg.
Dị ka okwu dị ugbu a bụ nke ụghalaahịa, ị ga -pịa “Usoro maka akara pụrụ iche”, nke bụ ihe a ghọtara dị ka ụghalaahịa.
Na -esote, ị ga -aga "Ngwa maka ụghalaahịa, aha azụmaahịa na ụdị mba ụwa". Dejupụta ozi niile ha rịọrọ. Ọ dị mkpa ka ịhọrọ ụdị ika (dịka anyị kwuru na mbụ). Buru n'uche na ha ga -akwụ gị ụgwọ otu ihe ahụ ma ọ bụrụ na ị denyere aha ma ọ bụ ụka karịa aha ma ọ bụ ụka na akara, yabụ ọ bara uru ime maka ihe abụọ ahụ ma ọ bụrụ na i cheworị echiche banyere akara ị ga -eyi. .
Ọzọ ị ga -egosipụta ngwaahịa na ọrụ ndị ị na -arịọ maka ika ahụ, ya bụ, ihe ị ga -eji ika ahụ mee. Dịka ọmụmaatụ, were ya na ị ga -emepụta akara "Real" ma were ya chọọ ịre biya. Ọ dị mma, ị ga -egosi na ihe ị ga -eme bụ ịme biya. Kedu maka ị drinksụ mmanya karịa? Ọfọn, ị ga -ezipụta ya. A na -achịkwa nke a site na '' '' Nhazi ọkwa dị mma '', nke edobere dịka aha ya na -egosi na Nice na 1957, nke na -ewepụta usoro nhazi ngwaahịa na ọrụ ka ị nwee ike ịdebanye aha ha dị ka ụghalaahịa.
N'ozuzu, ọ nwere klaasị 45 nke, site na 1 ruo 34, ọ bụ maka ngwaahịa; na site na 35 ruo 45 maka ọrụ.
Ihe na -esote bụ nzọụkwụ dị n'etiti. Ebe a ị ga -enwe ike chekwaa ngwa ahụ wee nyochaa ya, ma ọ bụ gaa n'ihu na ya.
N'ezie, ị ga -akwụkwa ụgwọ ebe a, nke ga -abụ euro 125,36. Ugbu a, ọ bụ ọnụ ahịa ahụ ma ọ bụrụ na, na nhazi ọkwa Nice, ị nyela naanị otu klaasị. Ọ bụrụ na itinyela ọtụtụ, maka sekọnd ọ bụla na nke ọ bụla, ha ga -akwụ gị euro 81,21 ọzọ.
Ozugbo ị kwụrụ ụgwọ ahụ, ị ​​ga -ebudata nnata ma chere ka ịnụrụ site na ika ahụ.
Ogologo oge ole ka ọ na -ewe iji debanye aha ụghalaahịa?
Ọ dị mma, anyị nwere nwute ịgwa gị na oge iji dozie ngwa maka akara ụghalaahịa nke mba bụ ọnwa iri na abụọ, ọ bụrụhaala na enweghị mmegide ma ọ bụ na enweghị akwụkwọ ma ọ bụ njehie. Ọ bụrụ na nke ahụ emee, enwere ike ịgbatị usoro ahụ ruo ọnwa 12.
Ọzọkwa, ọ bụghị usoro ebighi ebi. N'ime afọ iri ọ ga -agwụ, ọ bụ naanị mgbe ahụ ka ị ga -emegharị ya afọ iri ọzọ ma ọ bụ ruo mgbe ebighi ebi, mana ịkwụ ụgwọ mmeghari ohuru.
Ọ dokwuo anya ugbu a ka esi edebanye aha ụghalaahịa?
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Eziokwu na akụkọ » StartUps na ndi oru itumgbere ahia » Etu ị ga-esi debanye aha